भाइरल हुदै शाहरूखका छोरा आर्यनको फोटो, फ्यान भन्छन: सबैको छुट्टी गर्दिन्छन यी हिरो ! – An Online Entertainment News Portal
HomeNewsBollywoodभाइरल हुदै शाहरूखका छोरा आर्यनको फोटो, फ्यान भन्छन: सबैको छुट्टी गर्दिन्छन यी हिरो !
March 25, 2019 Tulasa Karki Bollywood, Gallery, News 0
बलिउडका चर्चित अभिनेता शाहरूख खानकी छोरी कुनै-नकुनै कारणबाट सधै मिडियामा चर्चामा आउने गर्छिन । तर यस पटक भने छोरी नभएर पालो उनको छोरा आर्यन खानको आएको छ ।
भखरै उनको छोराको केहि फोटो सामाजिक संजालमा निकै भाइरल बनिरहेको छ । यी फोटो हेर्ने हरकोही अहिले उनका फ्यान भइरहेको छन । यति मात्र नभए उनका फ्यानहरुले आर्यन फिल्ममा आएमा धेरै राम्रा भन्दा राम्राको छुट्टि हुने बताएका छन् ।